Petite Sirah - Durif - Umdiliya - Mzantsi Afrika
Umdiliya obalaseleyo obomvu ovelisa I wayini ezibomvu ezipheleleyo nezaqala ukwenziwa kwiminyaka yo 1880 ngu Gqirha Francois Durif ngokudibanisa i SyrahxPeloursin. Idumile e Carlifonia, iPetit Sirah iyakhuliswa nase Argentina, eBrazil, eMexico nase Australia. Kuthiwa eyona nto incinci (‘petite’) nge Durif ngamagaqa ayo omdiliya. Ivelisa umbala ogqamileyo obomvu.
Ilali yase Rhône, kwelase France
iPetit Sirah ikwabizwa nange Durif (ithiywe ngegama lomntu owayiqambayo), eligama lisetyenziswa yi SA Wine Industry Information & Systems (SAWIS). iPetite Sirah ayifunekanga ibhidaniswe ne Petite Syran, nengumdiliya onamagaqa amancinci. Angapha kwe 35 amagama e Durif akhoyo kwihlabathi lonke liphela.
Kulamagama iDure, iDuret, iPlant Durif ne Pinot de Romas (France) ayasetyenziswa.
iDurif ayihlobenanga ne Petite Sirah yase Carlifornia, nanjengoko intlolo ye DNA yaveza oko ngomnyaka 1997.
Linani eliphantse layi 114ha ele Durif etyalwe eMzantsi Afrika, neyaqalwa ngu Vititec ngomnyaka ka 2001.
Yaqala ukulinyelwa ushishino ngonyaka ka 2004 kwi fama I Fairview ePaarl. Uninzi lwale 114 ha lwe Durif lityalwe e Breedekloof (34ha) nase Paarl (31ha). Izityalo ezitsha ezingama 24 ha zatyalwa ngonyaka 2016.
Imithi eyomeleleyo ye Petit Sirah ingamelana nentlobo ezahlukeneyo zomhlab, iyachuma kwaye ithwala isivuno esifikelela kwi 22-24t/ha. Imithi yalomdiliya iyanaba ngoko ke kufuneka yakhelwe izixhasi ukunqanda ibhantshi zingarhuqi emhlabeni. Tyala uxinanise kakhulu okanye phakathana.
Imidiliya ivunwa phakathi kwixesha lokuvuna.
Amagqabi aphakathi- ukuya kubukhulu ngokomlinganiselo, amile okwe pentagon kwaye anekona ezintlanu.
iPetit Sirah inamagaqa amancinci omdiliya, axineneyo.
Izityalo ezine bhantshi ezixinene kakhulu zisenokubola. Imidiliya inechuku kwilanga elitshisayo. iPetite Sirah ayichaphazeleki lula kukungunda, nokwayenza yaduma e France nge Sentyuri ye 18, nangona inqabile eFrance namhlanje.
iDurif isetyenziselwa ukuvelisa iwayini ezibomvu ezinencasa eshoqololo, isenokuxutywa neminye imidiliya ukuvelisa iwayini okanye kusetyenziswe yona yodwa. Kwimixube, yongeza incasa kunye nombala ocacileyo.
Iwayini zisenokuba nencasa eswiti evakala kakhulu, eshoqololo, kwaye emnyama. Lomdiliya waziwa e Carlifornia nge vumba layo elimandla nencasana ne pepire emnyama. Ine tannin eziphezulu, iwayini zingavundiswa ithuba elide- ishumi ukuwe kwamabini eminyaka.